Miaraka amin'ny fivoaran'ny The Times, maro ny mpamokatra fitaovana indostrialy no tia ny mitondra fitaovam-piaramanidina sy ny robot amin'ny fefy, milalao fitokana-monina azo antoka mba hiarovana ny fiasan'ny milina mahazatra sy ny fiarovana ny mpiasa. Ahoana ny alimina indostrialy ho an'ny fefy fanao? Tokony ho tsara! Ary ...
Maninona no maty ny mombamomba ny aliminioma - manokatra fomban-drazana bebe kokoa?
Ny profil aluminium alimina dia karazana extrusion alloy aluminium novokarin'ny vokatra indostrialy nampiasaina profil. Ny mombamomba ny alimina aluminium dia midika fa ankoatr'ireo 20,30,40,50,60,80,90,100,120 sy ireo andiany mahazatra an'ny aliminioma, ny mombamomba ny alimo alimo dia mety manana ...
Ny horonan-tsarimihetsika vita amin'ny alimina namboarina dia mila atahorana
1. Tena tokony hamboarina manokana ve izy io? Raha te-hanamboatra ny mombamomba ny aliminiôna ianao ho an'ny endriny ivelany amin'ny fitaovana, dia tsy tokony hamboarina manokana ianao, satria ny profil aluminium aliminiana mahazatra dia profil aluminium avo lenta avo lenta, ary maro ny fepetra arahana, ca ...